XOG XASAASI AH: CADAADISKA SHACABKA JUBALAND DOWLADU KU HEYSO WAA DENBI QARAN – jinaawkeytv
XOG XASAASI AH: CADAADISKA SHACABKA JUBALAND DOWLADU KU HEYSO WAA DENBI QARAN
Posted on October 6, 2019 at October 6, 2019 by admin
Wixii kadanbeeyey doorashadii kadhacdey magaalada Kismaayo, shacabka kunool dowlad goboleydka soomaaliyeed Jubaland waxey marti unoqodeen ciqaab wadareed aysan muteysan taas oo kaliftey in shacabku dareemo in aysan wax xaquuq ah kulaheyn dalka.
Dowlada federalka soomaaliya oo hogaamiyo MD Farmaajo ayaa qaadey talaabooyin guracan oo lagu naafeynaayo shacabka soomaaliyeed ee kunool deegaanada Jubaland kadib markii dowladu ku fashilantey isku dey afgenbi doorasho oo ay quuddareyneysey in ay ku soo saarto musharaxiin ayadu ay wadato.
Talaabada dowladu ay ku dooneysey in ay ku afduubto doorashada ayaa fashilantey kadib markii gaashaanka u daruurey madaxweynihii dowlad goboleedka soomaaliyeed ee Jubaland mudane Axmed maxamed islaam oo dib ugu guuleystey doorasho kadhacdey Kismaayo bishii agoosto 22 2019 taas oo si toos ah looga baahinayey tv madax banana ee dalka waxaana doorashada goob joog kahaa wufuud kala duwan oo ka kala socotey hay’adaha sharci dejinta dalka (golaha shacabka iyo Aqalka sare) kuwaas oo kor udhaafayey 70 xildhibaan.
hadaba maxaa dhacey doorashada kadib?
DF soomaaliyeed ee uu hogaamiyo madaxweynaha Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa qaadey doorashadii kadib talaabooyin guracan oo lagu caburinaayo shacabka Jubaland arintaas oo layaab iyo fajac ku noqotey shacabka soomaaliyeed guud ahaan
Qaar kamid ah talaabooyin ay dowladu qaadey doorashadii kadib;-
Joojin duulimaadyadii kismaayo kabixi jirey iyo kuwii soo geli jirey
Amar kasoo baxey xukuumada MD Farmaajo ayaa lagu Joojiyey dhamaan duulimaad yadii kismaayo oo ah caasimada kumeel gaarka maamulka Jubaland si dowladu ay u muujiso awoodeeda.
Xayiraada duulimaadyada waxaa kadhashey ciqaab wadareed ay wada taabatey bulshada qeybaheeda kala duwan.
Waxaa istaagey dhamaan adeegyadii dadweynaha magaalada kismaayo iyo deegaanada ku hareereysan waxaa ku dhintey 3 ruux kuwaas oo xanuunkooda wax looga qaban waayey maalada kismaayo caasimada muqdishona gaari waayey maadama aanu jirin duulimaad.
Arintaan ayaa ka hor imaaneysa xaquuqda aadana iyo xuriyada muwaadin , dadka daraaseeya qawaaniinta caalamiga ah ayaa aamin san in dadka dhintey ay masuul katahay cida sababtey geeridooda oo amarkeeda lagu joojiyey.
Waxaa dooman kutagey ardey soomaaliyeed oo dugsi sare ku dhameysey magaalada kismaayo kuwaas oo doon yar ugu safrey magaalada muqdisho si daraasadooda u baaqan, muwaadin kasta oo soomaaliyeed wuxuu xaq uleeyahay in uu wax barto halkuu doonana u dhaqaaqi karo.
Afduub wasiir katirsad Dowlad Goboleedka Jubaland
Wasiirka amniga Jubaland Cabdirashiid Xasan (Janan), oo dowlada soomaaliya horey u burisey dacwad loo heestey ayaa hadana waxaa laqabtey isagoo ku guda jira gudashada waajibkiisa qaran waxaana lagu sababeeyey in fal denbiyeed loo heesto
Hadaba su’aashu waxey tahay dowladu balanteedu mafusho miyaa muwaadin lacafiyey maxaa loo qabtey mise dowlada cafis keedi hore ayaa gor gortan siyaasadeed ku jirey?
Shacabka soomaaliyeed ee dowlad jeceylka kabatey ayaa kaniyad jabey habdhaqanka qaarkiis ee hogaanka dowlada federalka ku kacaan.
Hadaba hadii dowlada go’aanka maanta gaarto beri ka noqoneyso masuulida dalku maqaadi kartaa?
Waa su’aal furan oo hortaala taageerayaasha xuurteysan ee dowlada federalka sida indha la’aanta.
Jebinta tastuurka iyo qawaaniinta dalka
Nidaamka dalku qaatey waa federal waxaana tilmaaya dastuurka KMG ah, dowlada federalka waxey si toos ah udiidantahay dastuurkii ayadu ku timid taa bedelkeedana waxey ku takri fashaa awoodaha fulinta oo u isticmaasho dano iyo maslaxad ayadu ugaar ah.
Maamulada dalka kajira waxaa dastuurku siinayaa in doorashadooda ayagu u madaxbanaanaadaan si xor ahna uqabsadaan, wasaarada arimaha gudaha waxey xaq uleedahay in ay goob joog kanoqto doorashada ayadoona faragelin iyo nin jecleysi sameyneynin waxaana waajib ku ah dowlada in ay aqoonsato natiijada doorashada kasoo baxda.
Hadii dowladu ay sameyso eex waxey weyneysaa xaqqii ay u laheed in ay goobjoog ka noqoto maamulka isdoorteyna waxaa xaq uleeyahay in dowladu aqoonsato qofkii ay doortaan golaha wakiilada maamulkaas
Hadaba dowlada maanta jirtaa waxey u muuqataa mid xaqeeda wax kabadan raadsata ayadoo maamuladii dalka dhisnaana dumineysa waxaana daliil u ah, shaqaaqadiikadhacdey KGS ayadoo dowladmadaxweyne shariif xasan u caga jugleysey afduub sharic daro ahna ugeysatey musharaxii uga awooda badnaa doorashadaas waxaa kadhshey qasaare naf iyo maal shacab aaana lagu xasuuqey.
Madaxweynaha DF soomaaliya Mudane maxamed Cabdullahi Farmaajo oo hadal kajeediyey caleema saarkii madaxweyne Lafta Gareen ayaa yiri “ doorashada halkaan kadhacdey waa mid xor iyo xalaal ah” waxaana xiligaas taaley tacsi 15 muwaadin oo si xaq daro ah loo toogtey xiligii afduubka doorashada socotey waxaana weli xabsi xukun la’aan ah ku jira muqtaar Rabow oo musharax ahaa.
Hadaba hadii MD Farmaajo Aqoonsadey Doorasho dhiig ku daatey maxaa diidey in uu aqoonsado doorasho nabad iyo xaslooni ku qabsoontey.
Kutakri falka awooda waa denbi qaran masuul kasta wuxuu masuul ku yahay ilaalinta Dastuurka iyo Qawaaniinta Dalka u yaala hadii uu jebiyo waa ku kacey qiyaano qaran.
Madaxda soomaaliyeed ee maanta joogta waxaa waajib ku ah ilaalinta iyo kudhaqanka dastuurka si dowladnimada dadka loogu dulmin.
Waxaa weli jira fursad ay dowladeenna kusixi karto Qaladaadka Jira, hadii xoog iyo awood sheegasho meel lagu gaarikaro soomaali aduunka ayey hogaamin leheed laakiin dulmiga iyo baal marida Dastuurka wuxuu horseedaa fowdo iyo in dowlada laga aamin baxo fadlan madaxdeenow rajada haka dilina shacabka soomaaliyeed mar arkey iftiinka shumaca dowladnimo iyo macaankeeda
DAAWO BARNAMIJKA FANKA IYO SUGAANTA EE JINAAWKEYtv AL FANAAN DALBILE SOO SARE SHUKRI ISMACIIL
BARNAMIJKA FANKA IYO SUGAANTA EE JINAAWKEYtv AL FANAAN DALBILE SOO SARE SHUKRI ISMACIIL HOOS KA DAAWO MUQAALKA
SAWIRO:-Duqa Muqdisho oo la kulmay Wakiilka QM ee Soomaaliya
Posted by admin - October 8, 2019 0
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar Filish) ayaa maanta kulan la qaatay shir Ergayga…